shukaansiga gabdhaha yar yar | shumis.net
Home » galmada » shukaansiga gabdhaha yar yar
shukaansiga gabdhaha yar yar
Sirta ka dambeeysa in uu xidhiidhkaaga qoto dheeraado waa inuu sir kuu ahaada dhamaan wax yaalaha ku saabsan xidhiidhkaaga.
Jooji inaad la qeybsatid sirta xidhiidhkaaga qof kasta sida ( caqabadaha, dagaalka, sirta labadiina idinka dhaxeeyso iyo qaladaadka, hiigsiga mustaqbalka iyo goolashaba, wixii horey loo soo maray iyo waqtiyadii farxada).
Ma ahan in qof kasta oo kugu heeraarsan uu kaa taxadaro ama uu kuu rajeeynaayo wanaag. Qaar baa iska dhig dhigaayo ineey wanaagsan yahiin iyo ineey kuu rajeeynaayan wanaag laakiin saa,id beey u yihiin sun mana u qalmaan in lasoo dhaweeysto.
Sirta xidhiidhkaaga ku keeydso lamaanahaaga. Markuu is fahan waa idin dhex galo, la fadhiiso lamaanahaaga oo kala hadal is fahan waagaas.
Hadii aad adiga tahay qofka khaldan qiro oo ka raali geli. Hadii loo baahdo inaad ka tanaasusho wax yaalo fadlan ka tanaasul adigoo fiirinaayo xidhiidhkaaga, hadii eeysan socon taasna, talo ka raadi qof xaasle ah, wadaad ama labadiinaba taga masaajida oo ka raadiya caawin.
Jaceylkaaga oo aad u qoto dheeraado waxaa sababi karo waa adiga iyo sida aad ula dhaqanto lamaanahaaga…
Title: shukaansiga gabdhaha yar yar